100,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo ku taalla Suudaanta Koonfureed - BBC News Somali
100,000 oo ruux oo ku go'doonsan magaalo ku taalla Suudaanta Koonfureed
Image caption Barakacayaasha Suudaanta Koonfureed
Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay badqabka ku dhawaad boqol kun oo ruux oo ciidammada dowladda ay ku go'doomiyeen magaalada Yei ee dalka Suudaanta Koonfureed.
Afhyeen u hadlay hay'adda UNHCR, William Spindler, ayaa sheegay in ciidammada ay u diideen dadka rayidka ah inay ka baxaan magaaladaasi iyagoo ku tuhunsan inay taageerayaal u yihiin madaxweyne ku xigeenkii xukunka laga qaaday ee Reikh Machar.
War qoraal ah oo ay soo saartay hay'adda ayay ku sheegtay in haween iyo rag argagaxsan ay ka sheekeeyeen dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ah ee ku nool magaaladaasi. Hay'addu waxay intaasi ku dartay in dhowr ruux oo haween iyo caruur isugu jiro la dilay.
Waxaa la sheegayaa in beeraleyda aysan beerahooda aadi karin dalaggiiay beerteena uu qurmay, suurtagalna ay tahay in sanadka soo socdo aysanba beerahooda tabcan karin.